Asaa oké ihe na-eme na gị smartphone - News Ọchịchị
Asaa oké ihe na-eme na gị smartphone
E nwere doro anya na mobile technology na-abịa a nnọọ ogologo ụzọ n'elu-adịbeghị anya, na ọganihu mere mgbe ọ na-abịa color nyeere anyị na-enwe a nnukwu dịgasị iche iche nke ọrụ na uru mgbe eji ndị a ngwaọrụ.
Ebe anyị mobiles e ozugbo eji maka dị nnọọ phonecalls na ozi ederede, anyị pụrụ ime ugbu a nnukwu dịgasị iche iche nke aga-eme sitere na site egwu egwuregwu kọmputa na-ewere foto na ọbụna na-anata olu iwu si anyị ngwaọrụ mkpanaaka. Ebe a na-asa ihe ndị kasị n'ala-agbasa mobile innovations.
l Social ụka n'Ịntanet: Taa smartphones bụ zuru okè n'ihi na ụka n'Ịntanet na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ site na saịtị ndị dị otú ahụ dị ka Facebook na Twitter n'etiti ndị ọzọ. Kasị ekwe ka nnọọ mfe ohere na aka nke ihuenyo otú i nwere ike jikọọ na ndị ọzọ, bulite foto, òkè ọmụma, imelite gị ọnọdụ na ọtụtụ ndị ọzọ na di ntakiri hassle. Na maka ndị na-a ịhụnanya maka ihe niile nostalgic, mgbe ahụ Timehop ngwa ọbụna emepụta a dijitalụ Archive nke ndụ gị.
l -Foto: The ese foto na smartphones aghọwanye ọkaibe ihe karịrị afọ, na nke a pụtara na ị nwere ike iji ekwentị gị ka na-elu àgwà foto mgbe ị na-esi na banyere na-enweghị mkpa n'ihi na a igwefoto dijitalụ ma ọ bụ ndị ọzọ na ngwá. na na Google si Snapseed ngwa, ị nwere ike ịnweta ihe fọrọ nke nta ọkachamara larịị nke foto edezi ngwaọrụ, niile si na mma nke gị ama.
l -enwe ntụrụndụ: Ọtụtụ ndị na-ugbu a na-eji ha smartphones na-enwe a dịgasị iche iche nke ndụ ma na ha bụ ndị na-aga ma ọ bụ ọbụna mgbe ke ufọk. A na-agụnye ntụrụndụ dị ka ekiri streamed fim site a nso nke ọkachamara gụgharia saịtị, na-ege ntị ọtụtụ puku na redio ụgbọ online na Streema ngwa, ma ọ bụ na-ekiri YouTube videos n'etiti ndị ọzọ ihe.
l Na-egwu egwuregwu: Mgbe i nwere a smartphone, ị na-enwe kpọmkwem nke gị onye mobile Ịgba Cha Cha ngwaọrụ. Ị nwere ike ibudata fun na onwe-nkọwa mobile egwuregwu dị ka Ị kwesịrị ihiwe Boat na ngwaọrụ gị dị ka ụzọ nke livening elu ụtụtụ na-aga aga. Na ị nwekwara ike igwu egwuregwu ndị dị otú ahụ dị ka online ohere mpere na table egwuregwu n'ebe dị otú ahụ dị ka mmiri Casino, ebe ị pụrụ ịnụ ụtọ a akụ na ụba nke Ịgba Cha Cha ntụrụndụ na a oké dịgasị iche iche nke mebere cha cha egwuregwu niile si n'ọbụ aka aka gị.
l Sọfụ Internet: Gị ama na-eme ka ọ dị nnọọ mfe inwe online na sọfụ internet mgbe ọ bụla ị chọrọ, Ya mere, n'agbanyeghị ebe ị bụ, ị pụrụ ịnụ ụtọ ịbụ enwe ike ịnweta n'ụwa nile web. Na ihe na ndị ọzọ weebụsaịtị ugbu a emegharị maka mkpanaka ngwaọrụ ị nwekwara ike na-enwe a elu àgwà sọọfụ ahụmahụ mgbe ị na-eji mkpanaka gị na-online.
l Get kwesịrị ekwesị: Ọ bụrụ na ị chọrọ a obere enyemaka mgbe ọ na-abịa na-n'ime udi ma na-ekwesị, ị nwere ike nweta enyemaka dị gị mkpa na enyemaka nke gị ama. Ị nwere ike ibudata a nso nke ahụ ike na mma ngwa ọdịnala nke ga-eme ihe niile si na-enye gị na ekwukwa n'akwụkwọ ozi na a dịgasị iche iche nke oriri, ka aiding ị na nlekota na nsuso ngwaọrụ. Otu oké ihe atụ bụ NexTrack na ngwa na-abụghị nanị na free, kamakwa ejisie na-eme ka mmega fun!
l Iji ya dị ka a onye nnyemaaka: Dabere na nke smartphone na ị nwere, i nwere ike iji ngwaọrụ gị dị ka a onye nnyemaaka na-enyere hazie ndụ gị na-ị na-asian. Nke a na-agụnye iji dijitalụ-enyere aka dị ka Siri site Apple ma ọ bụ Cortana, dijitalụ nnyemaaka maka Windows 10.
Na ọtụtụ dị iche iche ọrụ dị, ya mere na taa mobile phones aghọwo dị ka akụkụ dị mkpa nke ndụ anyị.
← Ịsụ ụzọ cancer ọgwụgwọ injinia dịghịzi usoro na-alụ ọgụ ọrịa Mark Zuckerberg na-ekwu na nkwado nke ndị Alakụba mgbe izu nke bụ 'ịkpọasị' →